यसरी गरियो कन्चनको अन्तिम बिदाई, अमरप्रेमी बनेका कन्चनलाई अन्तिम बिदाई गर्दा आमाको भयो यस्तो हालत ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
March 9, 2021 AdminLeaveaComment on यसरी गरियो कन्चनको अन्तिम बिदाई, अमरप्रेमी बनेका कन्चनलाई अन्तिम बिदाई गर्दा आमाको भयो यस्तो हालत ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
मृत्यु भएको दुई दिन पछी कन्चनको अन्त्यष्टि गरिएको छ । कञ्चनको शव धेरै दिन बाहिर राख्दा विग्रन थालेपछि प्रहरीको रोहवरमा भएको सहमति अनुसार शव उठाइएको हो । मंगलवार देवघाटमा कञ्चनको अन्त्यष्टि गर्ने सहमति अनुशार अनिशाको घरवाट शव उठाइएको हो । लामो समयसम्म छोराको उपचारको लागि अस्पतालमा बसेकी आमा निधन पछि एक्लिएकी छन् ।
यसरी गरियो कन्चनको अन्तिम बिदाई, भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस ।
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७७ साल फाल्गुन २६ गते बुधबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मार्च १० तारिख